कथा– 'अकारण' ! | Hamro Doctor info@hamrodoctor.com
कथा– 'अकारण' ! Home
कथा– 'अकारण' !
Aug 27, 2016 14:08
By डा. टीकाराम भण्डारी
घण्टा, दिन, महिना, वर्ष हुदै दाम्पत्य जीवनले दोश्रो बर्षमा खुट्टा टेक्दै थियो । उमंग, आवेग, जोश उस्तै गरी कायम थियो 'मिस्टर एण्ड मिसेज' गिलानी परिवारमा । नयाँ घरमा भर्खर सरेका थिए उनीहरू । डेराको लामो समयको बसाईबाट भर्खर छुटकारा मिलेको थियो । नयाँ घर रङ्ग–रोगन हुँदै थियो । तेस्रो तलाको रङ्ग–रोगन वाँकी थियो । बार्दलीमा विशेष रङ्ग लाउने योजना मिसेजको थियो । मिस्टर गिलानीले स्वीकार गरेका थिए यसलाई । फराकिलो जग्गामा बनेको घर आकर्षक हुँदै थियो । 'कम्पाउण्ड' पर्खालको श्रङ्गार भर्खर सकियो । दोस्रो तलामा आफूलाई छुट्याएर पहिलो तलामा भाडामा लगाउने सोच वनाउँदै थिए उनीहरू । तेस्रो तलाको दुई कोठालाई बैठक कोठाझैँ सिँगारेका थिए । आँगनमा गाडी पार्किङ समेत बनिसकेको थियो जसको छानोमुनि रातो 'टोयटा' गाडी बिसाउँथ्यो । फूलबारीमा फूलहरु फुल्दै थिए । फल– फूलमा आँप र लिचिका केही बोटहरू आफूलाई जवान बनाउने तर्खरमा थिए । 'कम्पाउण्डको' पछाडि भागमा केही अम्बाका बोटहरूमा बाक्लै अम्बा फलेका थिए । बर्षायाम भएकाले झरी आफ्नै मर्जीले बर्सिरहेको थियो ।
मिस्टर गिलानीले हतार–हतार ढोका खोले र 'कम्पाउण्ड' बाहिर रोकेको गाडी छेउ पुगे । मिसेज पनि झोला लिएर पछि- पछि थिइन । मुसुक्क मुस्कुराएर मिस्टरले मिसेज गिलानीको निधारमा म्वाँइ (चुम्बन) खाए र श्रीमतीसँग विदा भइ अफिस तर्फ लागे । श्रीमानलाई विदा गरेर मिसेज फुरुङ हुँदै घरभित्र पसिन् । श्रीमानको स्पर्शबाट प्राप्त निधारको चिसोपन उनले निकैबेरसम्म पनि महसुस गरिरहिन । भान्सामा भाँडाकुडा यत्रतत्र थिए । मिस्टर गिलानीले हतार–हतार ढोका खोले र 'कम्पाउण्ड' बाहिर रोकेको गाडी छेउ पुगे । मिसेज पनि झोला लिएर पछि- पछि थिइन । मुसुक्क मुस्कुराएर मिस्टरले मिसेज गिलानीको निधारमा म्वाँइ (चुम्बन) खाए र श्रीमतीसँग विदा भइ अफिस तर्फ लागे । सफा गर्न थलिन, छरपस्ट भाँडाकुडा मिलाएर कपडा धुने योजना बनाइन । सर्फमा कपडा भिजाइन र बैठक कोठा मिलाउन थालिन । कोठामा 'बेड'लाई चिटिक्क पारिन् । यो सबै मिसेजका लागि नियमित घरधन्दा थिए । उनीलाइ समय कटाउन निकै कठिन हुन्थ्यो। समय दौडिएला भन्दा चार बज्न हम्मे पथ्र्याे । तर घरका यस्तै काम गर्दा गर्दै तीन वजेपछि श्रीमानको बाटो हेर्नु र फोनको घण्टी दिइहाल्नु सधैको दिनचर्या भैसकेको थियो । चार बजेपश्चात् रातो 'टोयटा' गाडीको आवाज आएपछि उनी फेरि फुरुङ हुन्थिन् । दर्गुदै गेट खोल्न पुग्थिन् । कामबाट थाकेर आएका मिस्टर गिलानी गाडीबाट झोला मिसेजलाई दिँदै घर छिर्थे । घरमा अनौठो उज्यालो छाउँथ्यो । दिनभरको एकान्त र शुन्यता सबै भंग हुन्थ्यो । यी दुवैको दैनिकी लगभग यसरी नै चल्दै थियो ।
शृङ्गार पटार सकिएपछि घर टिलिक्कै टल्कियो । घरसम्म आइपुग्ने नगरपालिकाको बाटो पनि 'पिच' भयो । खाली समय विताउन गाह्रो भएपछि मिसेजको आग्रहमा माथिल्लो तलाको कोठामा श्रृङगार पसल खोल्ने निधो गरे उनीहरूले । सर-समान, तयारी पुरा भएपछि पसल पनि खुल्यो । नयाँ घरमा । वाहिर सानो 'वोर्ड' पनि राखे । 'गिलानी ...' नामको । अक्कल झुक्कल ग्राहक पाए पछि मिसेज गिलानीको दिनचर्या केही सहज बन्न थाल्यो । प्राय ग्राहकहरू महिला नै हुन्थे । पुरुषहरू अहिलेसम कोही आएका थिएनन । मिसेजको दिनचर्याबारे मिस्टर गिलानीले घर आइपुग्दै सोध्यो–‘आज कस्तो रह्यो तिम्रो व्यापार ।’ व्यापार भन्दा पनि साथी झैं भएको थियो श्रृङ्गार पसल मिसेजलाई । एउटी , दुइटी ... हरेक दिन मुसुक्क हाँस्दै भन्थिन मिसेजले । ‘टाइम पास राम्रै छ ...’ उनले भन्थिन् । मिस्टरले थप्थे ‘भनेजस्तै चल्दै छ समय ।’
यस्तै ३०–३५ वर्ष उमेरका थिए उनी । पाका पुराना झैँ लाग्ने । हाउभाउमा उमेर खाएका झैँ ।सामान्य मोटोपन, गोरो वर्ण, सिर्लिक्क तन्किएको बाँसको झैँ उचाइका । सामान्य बोलीचालीका थिए उनी ।
यस्तै यस्तैमा घरको तल्लो तलामा डेरावाल बनेर आइपुगे 'मिस्टर हाकिम' । एउटा परियोजनाका हाकिम । अविवाहित । यस्तै ३०–३५ वर्ष उमेरका थिए उनी । पाका पुराना झैँ लाग्ने । हाउभाउमा उमेर खाएका झैँ ।सामान्य मोटोपन, गोरो वर्ण, सिर्लिक्क तन्किएको बाँसको झैँ उचाइका । सामान्य बोलीचालीका थिए उनी । मिस्टर गिलानीसँग कुनै कर्मचारीको सहयोगले सम्पर्कमा पुगेका । हाकिमलाई चाहिएको, गिलानीलाई दिनुपरेको भाडाको कुरा मिल्यो । र, हाकिम त्यही घरमा बस्न थालेपछि केही चहल पहल पनि बढ्न थाल्यो । 'पार्किङ'मा अर्काे गाडी पनि थपियो ।
एकदिन हाकिमको विदाको दिन थियो । मिस्टर गिलानी अफिस हिडिसकेका थिए । मिसेज गिलानीको 'व्युटिपार्लर'बाट एक दुई महिला श्रृङ्गार गरीवरी निस्किए । हाकिम वगैँचामा कुर्सी राखेर समय विताउँदै थिए । दिउसो बाहिर निस्कने योजनामा थिए उनी । हाकिमको बसाई भएपछि तल्लो तला पनि घरझैं भयो । हाकिम विहान नौ वजे नै निस्कन्थे डेराबाट । साँझमा फर्कन्थे । 'प्राइभेट कम्पनी' भएकोले अलि बढि नै खटिनु पथ्र्यो उनलाई । तर हप्तामा सनिबारबहेक एकदिन साप्ताहिक विदा बस्ने गरेका थिए । अर्थात हप्तामा पाँचदिन उनले काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । विहानको खाना डेरामा खान्थे उनी । विदामा भने दुवै समय घरमै खाना वनाउथे । साँझको वेला मिस्टर गिलानी- मिसेजको भेट हाकिमसँग अक्कल झुक्कल हुन्थ्यो । तर ती दम्पतीले भने उनको हेक्का सधै राखिनै रहेका हुन्थे । अक्सर 'कम्पाउन्डको गेट' राती लगाउने वेलामा ती हाकिम घरमा भए नभएको ख्याल राख्नु उनीहरुका लागि नियमित जस्तै थियो । हाकिम उक्त परियोजनामा नयाँ जागिरेका रुपमा पुगेका थिए । पुराना बर्खास्तगी भएपछि यिनलाई ल्याइएको थियो । उनले पनि आफ्नो जागिरमा केही देखिने गरी परिवर्तन गरिसकेका थिए । खासगरी ढिला सुस्ती, कर्मचारीको लापरबाही कम गरेर आफ्नो उपस्थिति दहे बनाउँदै थिए अफिसमा । अफिसमा उनको सक्रियता देखेर ठगहरू आंतकित थिए ।
एकदिन हाकिमको विदाको दिन थियो । मिस्टर गिलानी अफिस हिडिसकेका थिए । मिसेज गिलानीको 'व्युटिपार्लर'बाट एक दुई महिला श्रृङ्गार गरीवरी निस्किए । हाकिम वगैँचामा कुर्सी राखेर समय विताउँदै थिए । दिउसो बाहिर निस्कने योजनामा थिए उनी । काम हुँदा विदा भए हुन्थ्यो भन्नुपर्ने, विदा हुँदा समय कटाउन गाह्रो पर्ने गथ्र्यो हाकिमलाई ।
मिसेज गिलानी माथि तलामा आफ्नै काममा व्यस्त थिइन । हाकिमको मुहारमा अनौठो खालको चाँया-पोतो पलाएको थियो ।
‘पोतो हटाउन के गर्नुपर्ला’ –'व्युटिसियन' अर्थात पार्लर खोल्नेहरूलाई ज्ञान होला भन्ने सोचेर मिजेस गिलानीलाई सोध्न पुगे ।
मिसेजले 'फेसियल' गर्नुपर्ने वताइन ।
हाकिमको 'फेसियल' अर्थात चाँया हटाउने सफाई मिसेज गिलानीले गरिदिन थालिन । उनीसँगै मिसेजको ग्राहक संख्या पनि तीन पुग्योे ।
साँझ पर्यो । गिलानी परिवार आफ्नै दुनियामा हुन्थ्यो । मिस्टर गिलानी अफिसबाट फर्किएपछि मिसेजले पसलको बारेमा अपडेट सुनाइन ‘आज तीन जना ग्राहक भए ।’
‘तल हाकिमको अनुहारभरी कस्तो पोतो रहेछ आज फेसियल गर्दिएँ ।’ ‘अझै दुइ तिन पटक गनुपर्छ ।’–मिसेजले मिस्टरलाई सुनाइन ।
‘गोरो छालामा पोतो नसुहाउने है ।’ –अझ थपिन ।
अरु दिनझैं सामान्य रूपमा लिदै मिस्टरले भने –
‘पुरुषको फेसियल पनि गछ्र्यौ तिमी ’ ।–
‘फेसियल पनि ... के पुरुष । के महिला ... । जसलाई चाहिन्छ उसैको ।’ – मिसेजले जवाफ दिइन ।
भोलि भयो ।
वगैँचामा फूलहरू फुल्ने र झर्ने क्रम चल्दै थियो । अम्बाका बोटमा प्रशस्तै अम्बा पाक्ने तर्खर गर्दै थिए । लगातारको झरिले केही पाकेका अम्वाहरू घर पछाडिपट्टि भुँइमा यत्रतत्र छरिएका थिए ।
अम्बा–मिस्टर गिलानीको मनपर्ने फल छ । ‘भित्र रातो गुदी भएको अम्बा त झन स्वादिलो हुन्छ ।’ सधै अम्वाको प्रसङ्ग आउदा मिस्टर गिलानी यसै भन्छिन ।
हप्ता वित्दै गए । हाकिमको अर्काे विदा आयो ।
दिन सामान्य तरिकाले नै बित्यो ।
साँझ मिसेज गिलानीले प्रसङ्ग कोट्याउँदै श्रीमान लाई सुनाइन ‘तल हाकिमलाई पनि अम्बा सा¥है मनपने रहेछ, तपाईलाई झैं । 'आज एक थाल बटुलेर दिए । सडेर खेर जानुभन्दा खानेलाई दिए झन राम्रो ।'
मिस्टर गिलानीले ‘के सोचे कुन्नि ?’
दलिनमा हेरेर टोलाए ।
'ग्राहक आएनन् आज? अम्वा वटुलेर वस्यौ तिमी ?' प्रश्न तेर्साए । मिसजले भनिन् 'आज सुख्खा भयो ।'
भोलिपल्ट हाकिम आफ्नै तवरले दैनिकी गुर्जार्दै थिए । उता मिस्टर एण्ड मिसेजकोे पनि दैनिकी आफ्नै लयमा गुज्रिरहेको थियो । समय वित्दै गयो ।
मिसेजले दिन भरीको क्रियाकलाप मिस्टरलाई वताउने गर्थिन ।
नवताँउदा मिस्टरले नै सोध्थे ।
‘के भो आज ? कति ग्राहक भए ? के गर्यौ ?’
स्थिति सामान्य चालिरहन्थ्यो ।
एकदिन मिस्टर गिलानी अकस्मात दिउँसो अफिसबाट घर आए । त्यो दिन हाकिमको छुट्टिको दिन थियो । गेटमा बाहिरबाट ताला लागेको थियो । घरमा कोही थिएन । मिसेज पनि घरमा नभएको पाएपछि मिस्टर गिलानी अन्यौलमा परे । तुरुन्त मिसेजलाई फोन गरे । तर फोन सम्पर्क हुन सकेन । नेटवर्कमा समस्या भएको वताइरह्यो मोबाइलले । मिस्टरले कम्पाउन्ड बाहिरै गाडि राखे र कम्पाउन्डको पछाडि भागबाट पर्खाल उफ्रेर भित्र पसे । सुनसान थियो घर । मूलढोकामा पनि ताला भुण्डिएको थियो ।
पखाईमा मिस्टर दिउसो भरि नै वसे । साँझ परेपछि हातमा झोला झुण्ड्याउदै मिसेज आइपुगिन । गाडी बाहिर रोकिएको थियो । श्रीमान् आएछन भन्ने त्यसैबाट चाल भयो उनलाई । हतार हतार गेट खोलिन । भित्र वरण्डामा मिस्टर गिलानी झोक्राएर वसेका थिए । आँखामा क्रोध थियो उनको ।
‘कहाँ गएकी ?’
‘वजार गएकी थिएँ ।’
‘आजकै दिन पारेर जानुपर्ने तिमीलाई ?’
‘आज त हाटबजार को दिन हो त ?’ त्यसैले
‘कतिखेर आउनु भो ?’
‘दिउसै ! फोन गर्नुभएन त ।’
साह्रै टाउको दुख्यो, अनि फर्केको चाडै ।
मूल ढोका खुल्यो । दुवै भित्र वसे ।
खाना खाइ वरी विस्तारामा पुगे दुवै जना । रात पलाउदै थियो । छिप्पिने तरखर गर्दै गरेको अवस्थामा । मिस्टर गिलानी दलिनमा हेरेर टोलाएका थिए । मिसेज छेऊमा पल्टिरहेकी थिइन ।
हाकिम कहाँ गएछन आज ? मिस्टरले सोधे ।
‘दिउसो त यही थिए । आज पनि फेसियल गर्दिएकी थिएँ ! फरक परेको रहेछ चाँयामा । अर्कोपल्ट गरे पुग्ला ।’ मिसेजले वताइन ।
‘वजार जाँदा बाटोसम्म सँगसँगै निस्के’ ।
“आज पनि हाकिमले खुब मिठो मानेर खाए अम्बा । प्रसङ्ग उठ्नासाथ मिसेजले विस्तार गर्न थालिन ।
हाकिम साब, अब तपाईले डेरा अर्काे वन्दोवस्त गर्नुहोला । सकेसम्म चाडै” बोलीमा सुख्खापन थियो मिस्टरको गिलानीको । केही कुरा नसुनेर गिलानी माथि तलामा सिँढी चढे । हाकिम अक्क न वक्क भए ।
ओठमुख सुकाउदै मिस्टर गिलानी बोले “घरमा तिमी एक्लै भयौ । अब गाउँबाट आमा बुवा ल्याउनु पर्यो । तिमीलाई साथी हुन्छ । तलको कोठा खाली गर्नु भन्नुपर्यो हाकिमलाई ।”
विहान सवेरै मिस्टर गिलानी विस्ताराबाट उठे । केहि नसोची वाहिर निस्किए । हतारमा पछाडिका अम्बाका बोटहरू काटे । फलेका हाँगाहरू फल सहित भूइमा एकैछिनमा सुते । त्यति नै बेला तल्लो तलामा ढोका ढकढकाए । अबेर राती आएर सुतेका हाकिमले ढोका खोले । बाहिर खम्बा झैँ उभिएका मिस्टर गिलानी थिए ।
मिसेज गिलानी पनि तीनछक परिन । श्रीमानको व्यवहार देखेर । समय धकेलिदै गयो । काटिएका हरिया अम्बाका बोटहरू अब दाउरा भैसकेका थिए । हाकिम डेरा सरिसकेका थिए । हाकिमलाइ घरबाट निकाल्नु , अम्बाको बोट काट्नु .... यो सब बारे मिसेज गिलानीले केही पनि बुझिनन् । अहँ कहिल्यै बुझ्न चासो पनि राखिनन् ।
डा.भण्डारी युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवामा जनरल सर्जनका रुपमा कार्यरत छन् । हाम्रो डाक्टर एप (Google Playstore) र (Apple Store) मा पनि उप्लब्ध छ । डाउनलोड गर्नुहोला।
योगी डाक्टरः जो अस्पतालभन्दा योग केन्द्र खोल्न सुझाव दिन्छन्
1K By मधुसुदन ढकाल
काठमाण्डौ । डा. सुवास घिमिरे आफैमा दन्त तथा अनुहार शल्यचिकित्सक हुन् । उनी हिजोआज आफ्नो नियमित पेशासँगै योगतिर बढी...
अफ द बीटः बीमा हाकिम बाँचेर फर्किएको त्यो छिन्छु दुर्घटना... Jun 12, 2017 13:06
4.7K By उद्धवराज भेटुवाल
देशका विभिन्न जिल्लामा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका...
दन्त चिकित्सक रिजाल म्युजिक भिडियो निर्देशनमा Jun 09, 2017 10:06
875 काठमाडौं, २६ जेठ । दन्त चिकित्सक तथा चलचित्र निर्माता डा. कपिल रिजालको अर्को परिचय पनि थपिएको छ । अब उनी...
Jun 02, 2017 18:06
8.9K By डा. श्रेया सापकोटा
सायद यस्ता घटना अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर वा नर्स जो कोहीलाई नौलो नलाग्ला । बिरामीको कुरुवाले चर्को स्वरमा कराउने...